Apple Watch: 22 mhando dzaunogona kusarudza muna Kubvumbi | Yakafananidzwa | Ndinobva mac
Apple Watch: 22 mamodheru kusarudza kubva muna Kubvumbi
Zuva rekutanga raKurume uye nezuva rega rega rinopfuura pane zvishoma zvasara kune avo vanobva Cupertino kuvhura zviri pamutemo iyo Apple Watch, yekutanga yekambani uye yakamirirwa kwenguva refu inopfeka iyo inotarisira kugadzirisa chikamu chatove kuwedzera. Kana iwe usati uine chokwadi chekuti ndeupi akakukodzera, heano ma 22 Apple Watch mhando dzinozotengeswa muna Kubvumbi.
1 Apple Tarisa, zvakasiyana kune ese madiki
1.1 22 mhando dzinowanikwa muna Kubvumbi
Apple Tarisa, zvakasiyana kune ese madiki
Kune avo vasina chavanoziva vasingazive, anotevera Kubvumbi pakupedzisira iyo Apple Watch Ichasvika pamashefu ezvitoro zvemaapuro uye, kunyangwe isu tichafanirwa kumirira chiitiko ichi munaKurume 9 kuti tizive zuva chairo uye yekutanga wave nyika kwavanoitambira kutanga, iyo yatakaziva kubva munaGunyana wapera. ndeyekuti kune mitsara mitatu yeiyo Cupertino nyowani inopfeka: Apple Watch, iyo yakasarudzika modhi, Apple Watch Sport, ine chimiro chisina kujairika uye yakanyatsogadzirirwa vatambi, uye Shanduro yeApple Watch, yemhando yakasarudzika uye nemitengo yatisingatombodi kufungidzira.
22 mhando dzinowanikwa muna Kubvumbi
Ese ari muzvinhu zvakasiyana, maviri mabhokisi saizi uye marori emabhanhire kuti ubatanidze uye uwane iyo inonyatsoenderana nesitayera yako. Zvinotaridza kuti hazvisi zvese zvinobatanidzwa zvichave kubva pazuva rekutanga uye kubva kuEuropa Press ivo vanonongedza izvo izvi ndizvo zvichava 22 Apple Watch mhando dzinozotengeswa muna Kubvumbi.
Apple Watch ine chena fluoroelastomer tambo, inowanikwa mune maviri saizi (38 uye 42 mm), isina simbi kesi, yesafire kristina retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine dema fluoroelastomer tambo, inowanikwa mumatanho maviri (38 uye 42 mm), isina simbi kesi, yesafire kristina retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine yakasarudzika nhema nhema tambo, inowanikwa mune maviri saizi (38 uye 42 mm), isina simbi kesi, yesafire kristina retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine tambo yesimbi isina simbi uye Milanese Loop inovharwa nemagineti, inowanika muhukuru huviri (38 ne 42 mm), kesi yesimbi isina chinhu, safaya crystal retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine dombo-rakapetwa ribhebhi reganda tambo uye magnetic clasp, inongowanikwa mu 42 mm, simbi isina waya kesi, safaya kristina retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine bhuruu ine ribhoni yeganda tambo uye magnetic clasp, inowanikwa chete mu42mm, isina simbi kesi, yesafire sekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine brown brown ribbed yeganda tambo uye magnetic clasp, inowanikwa chete mu42mm, isina simbi kesi uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ne pink pink tambo, inongowanikwa mu38 mm, simbi isina simbi kesi uye clasp uye zvedongo kumashure.
Apple Watch iine bhandi rebhuruu repakati pehusiku, inongowanikwa mu38mm, kesi yesimbi isina chinhu uye clasp, uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine brown brown tambo tambo, inowanikwa chete mu38 mm, isina simbi kesi uye clasp uye zvedongo kumashure.
Apple Watch nesimbi isina simbi tambo uye shavishavi clasp, inowanikwa mumaviri maviri (38 uye 42 mm), isina simbi kesi uye zvedongo kumashure.
Apple Watch ine nzvimbo grey simbi isina tambo tambo uye shavishavi clasp, inowanikwa mumaviri maviri (38 uye 42mm), nhema-toni isina simbi kesi uye zvedongo kumashure.
Apple Watch Sport ine chena fluoroelastomer tambo, inowanikwa mune maviri saizi (38 uye 42 mm), anodized aluminium muviri, isina simbi korona, retina inoratidzirwa yakachengetedzwa neakasimbisa Ion-X girazi uye plastiki kumashure.
Apple Watch Sport nebhuruu fluoroelastomer tambo, inowanikwa mumaviri saizi (38 uye 42 mm), anodized aluminium muviri, isina simbi korona, retina inoratidzirwa yakachengetedzwa neyakaisirwa Ion-X girazi uye plastiki kumashure.
Apple Watch Sport ine lime green green fluoroelastomer tambo, inowanikwa mumatanho maviri (38 uye 42 mm), anodized aluminium muviri, isina simbi korona, retina inoratidzirwa yakachengetedzwa neyakaisirwa Ion-X girazi uye plastiki kumashure.
Apple Watch Sport ine pink pink fluoroelastomer tambo, inowanikwa mune maviri saizi (38 uye 42 mm), anodized aluminium muviri, isina simbi korona, retina inoratidzirwa yakachengetedzwa neakasimbisa Ion-X girazi uye plastiki kumashure.
Apple Watch Sport ine dema fluoroelastomer tambo, inowanikwa mumatanho maviri (38 uye 42 mm), mutema anodized aruminiyamu muviri, rima grey isina simbi korona, retina inoratidzirwa yakachengetedzwa neyakagadziriswa Ion-X girazi, uye mapurasitiki kumashure.
Shanduro yeApple Watch ine chena fluoroelastomer tambo, 18-karat yakasimuka yegoridhe kesi, 18-karat yakasimuka korona yegoridhe, yakabwinyiswa nesafiri yekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Shanduro yeApple Watch ine dema fluoroelastomer tambo, 18 karat yero yegoridhe muviri, inowanikwa chete mu42 mm, 18 karat yero goridhe korona, yakabwinyiswa yesafire sekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Shanduro yeApple Watch ine bhanhire repakati pousiku rebhuruu reganda, 18 karat yero yegoridhe muviri, inongowanikwa mu42 mm, 18 karat yero goridhe korona, yakakwenenzverwa nesafiri yekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Shanduro yeApple Watch ine greyish pink pink tambo, 18 karat yakasimuka muviri wegoridhe, inongowanikwa mu38 mm, 18 karat yakasimuka korona yegoridhe uye clasp, yakabwinyiswa nesafiri yekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Shanduro yeApple Watch ine tambo tsvuku yeganda, 18 karat yero yegoridhe muviri, inongowanikwa mu38 mm, 18 karat yero goridhe korona uye clasp, yakabwinyiswa yesafire sekristaro retina kuratidza uye zvedongo kumashure.
Muchokwadi, iwo mukana wekubatanidza mamodheru, mabhokisi uye tambo zvinotungamira kusarudzo dzakakura pane idzo dzakaratidzwa pano, zvisinei, sekureva kwemishumo kubva Europa Press, uye kunyangwe isu tisingazive kuti iro ruzivo rwunobva kupi sezvo pasina sosi yataurwa, izvi ndizvo zvichave Apple Watch mhando dzichawanikwa muna Kubvumbi.
Zvishoma nezvishoma apuro ichatanga mamwe mamodheru emabhanhire eiyo Apple Watch. Zvinoenderana neruzivo rwakaburitswa nekambani pachayo panenge paine huwandu hwayo 34 sarudzo dzakasiyanaUyu ndiwo mhedzisiro yemubatanidzwa wemamodeli, saizi dzemakesi uye tambo, kunyange hazvo zvisingabvumidzwe kuti gare gare, mhando nyowani dzemabhande dzichaonekwa uye kunyangwe kuti kambani ichabatana nemaoko nevamwe vagadziri uye kuti ivo vachatanga avo vamhando .
Uye hatifanirwe kukanganwa dzimwe sarudzo dzinotanga kubuda se Click, iyo adapta iyo inotibvumidza isu kushandisa chero yakajairwa 24mm tambo neyedu Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch: 22 mamodheru kusarudza kubva muna Kubvumbi
Dock pfungwa yeApple Watch ine USB HUB
Dzvanya, yekutanga tambo adapta yeApple Watch